Shiinaha Tactical Vest warshad iyo alaab-qeybiyeyaal | Feiqing
Jaakada xamuulka qaada ee saxanka xaraashka ku xeel dheer ayaa ka samaysan 600D oxford BA.duuleyn iyo raaxo leh, xoog xoog leh oo xoog leh isla markaana xirata caabbinta.Plate Carrier Vest waxaa si gaar ah loogu talagalay inay siiso qofka xiran inuu kordhiyo dhaqdhaqaaq leh dareen fudud iyo neefsashada ugufiican. Si ka duwan qaar ka mid ah jaakadaha miisaanka leh ee isbarbardhigaya ama jaakadaha jilicsan ee warshadaha, Tactical Weight Vest waxay qaban kartaa taarikada dhexdhexaadka ah iyo kuwa waaweyn-hore iyo gadaalba-iyada oo aan loo dulqaadan karin. Garbasaarrada harqoodku waxay yareeyaan kala-baxa, kooxaha xiisadaha la-hagaajin karo waxay hagaajiyaan xasilloonida, iyo dariiqyada socodka hawada ee hal-abuurka leh iyo mesh aerospace waxay hubiyaan raaxaysi joogto ah. Jaakada taaktikada ah ayaa si dhakhso leh ugu socota / ka baxsan cabbirka la hagaajin karo, garabka garabka ayaa la isku hagaajin karaa, iyo dhexda sidoo kale waa la hagaajin karaa. Dharka tababbarka ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa tababarka ranjiga hawada ee hawada sare, dabka dhulka duurjoogta ah, badbaadada, raadinta, samatabbixinta, CS, kaamaynta, ugaadhsiga, ciyaaraha iyo waxqabadyada kale ee bannaanka.
Miisaanka Saxar-wadaha miisaanka ayaa culeyskiisu yahay 1.48kg kaligiis, waxaana lagu dalban karaa qayb ka mid ah xirmo ay ku jiraan xirmooyin taariko is waafajin kara ah - oo ay ku jiraan xulashadaada saxannada Vest ee asalka ah: 3.75lb, 5.75lb, 8.75lb, ama waad awoodi kartaa Dhammaan jaakadaha miisaanka leh waxay la yimaadeen qalab waara, mareeg internet-yar-yar oo yar-yar oo la jaro, iyo gacan-qabsi dheereysi leh iyo siideyn deg deg ah.
Suufyada ka hortagga ee warqadda lidka ku ah ee lugaha lagaga saari karo oo leh jiito iyo hagayaal loop. Qalabka mesh-ka ee mesh tayo sare leh ayaa u oggolaanaya suunka garabka ka-hortagga si uu kuu siiyo raaxada ugu badan.
Jaakada side side 1.PD waxaa laga sameeyay 600D oxford BA.
2.Color: buluug buluug ah, madow, cagaar, cagaar, tayfon, midab CP, midabyo badan, cirro, CP
Miisaanka ugu culus wuxuu ku saabsan yahay 1.48 tiisa gaarka ah.
4.Can xirxirida saxanka laser-goynta caadiga ah: 3.75lb, 5.75lb, 8.75lb
5.Do logo caag ah qty kasta.
6.Package: 1pc / bac caag ah, 10pcs / kartoon: 62 * 55 * 30cm
Hore: Saxan bir ah oo heer sare ah
Xiga: Muusiga iska caabinta
Miisaanka Saxanka Miisaanka
Shandadaha adag ee adag ee adag